ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာခက်အောင်က COVID-19 ရောဂါထိန်းချုပ်ကာကွယ်ကုသရေးအတွက် ဆန်အိတ်နှင့် ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းများ လှူဒါန်းပေးသူများအား ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာပေးအပ်
ပင်မစာမျက်နှာ > April 2020 > April 14
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း COVID-19 ရောဂါထိန်းချုပ်ကာကွယ်ကုသရေးအတွက် ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့ အစည်းများ၏ ဆန်အိတ် (၁၀၀၀)နှင့် ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းများ လှူဒါန်းပေးအပ်မှုအတွက် ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်က ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများကို ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး မလိခခန်းမ၌ ပေးအပ်ခဲ့သည်။
လှူဒါန်းရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အလှူရှင် ဧဒင်အုပ်စုနှင့် ညီနောင်ကုမ္ပဏီများကိုယ်စား ဧဒင် ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ဒုတိယအထွေထေွ မန်နေဂျာ ဦးလှမင်းသိမ်းက COVID-19 ကပ်ရောဂါကာလ အတွင်း စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲကို အရေးပေါ်ဖြေရှင်းရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေလို၍ ဧဒင်ကုမ္ပဏီ နှင့် ညီနောင်ကုမ္ပဏီများမှ လှူဒါန်းရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားရာ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာခက်အောင်က ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း ယခုလို ကိုယ်ကျိုးမဖက် တတ်နိုင်သည့်ဖက်မှ ပြည်နယ်အတွက် လာရောက် လှူဒါန်းပေးကြသူများအားလုံးကို မိမိတို့အနေဖြင့် ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ပြန်လည်ပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်က ဧဒင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်နှင့် ညီနောင်ကုမ္ပဏီများဖြစ်သော မြန်မာ့ရှေ့ဆောင်ဘဏ်၊ Denko Trading Co.,Ltd. နှင့် ကဉ္ဇနကျွန်းသာ(Gold Delta) Co.,Ltd. တို့မှ လှူ ဒါန်းသည့် ဆန်အိတ် (၁၀၀၀)နှင့် အခမဲ့ဆေးဝါးကုသရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ (ရန်ကုန်)မှ ဒေါက်တာ ဗိုလ်ဗိုလ်မောင်မှ လှူဒါန်းသည့် 3MPPE ဝတ်စုံ (၂၀)စုံ၊ PPE ဝတ်စုံ (၁၀)စုံ၊ Mask အခု(၁၅၀၀)၊ Hand Gel ဘူး (၁၀၀) လှူဒါန်းမှုကို လက်ခံရယူခဲ့ပြီး ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများ ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့သည်။